Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Alemana » Nofoanana indray i Munich Oktoberfest noho ny valanaretina COVID-19
1 herinandro lasa izay
Oktoberfest dia ny fifamatorana sy ny fanavahana ny fiaraha-monina, ny sarontava ary ny fepetra fanoherana ny coronavirus hafa izay mety tsy ho azo tanterahina
Oktoberfest dia antenaina hiverina hiverina amin'ny volana septambra 2021
Mbola tsy voafehy ny toe-javatra epidemiolojika any Alemana
3.4 tapitrisa no voan'ny aretina ary 83,000 mahery no maty noho ny virus coronavirus any Alemana
Nanambara ny manampahefana Bavarian fa tsy maintsy hiandry herintaona ny mpitia labiera satria fetin'ny labiera lehibe indrindra eran-tany, Munich Oktoberfest, nofoanana nandritra ny taona faharoa nisesy noho ny areti-mandringana COVID-19.
Rehefa tsy notanterahina tamin'ny taona 2020, ny festival malaza, atao isan-taona any Munich, dia antenaina hiverina an-tsehatra indray amin'ity volana septambra ity. Saingy, hoy ny manam-pahefana alemà, ny toe-javatra epidemiolojika ao amin'ny firenena, izay nahitana aretina 3.4 tapitrisa ary maty mihoatra ny 83,000 noho ny coronavirus, dia mbola tsy voafehy.
“Alaivo an-tsaina hoe raha misy onja vaovao ary avy eo lasa hetsika manaparitaka izaitsizy. Ho simba mandrakizay ny marika - ary tsy mila an'izany izahay, ”hoy ny praiminisitra Bavarian, Markus Soeder, raha nanambara ny fanafoanana ny Oktoberfest 2021.
Ny fanalavirana ny fiaraha-monina, ny sarontava ary ny fepetra hafa fanoherana ny coronavirus dia mety "tsy ho azo tanterahina" amin'ny hetsika, izay mazàna manintona mpanatrika enina tapitrisa avy eo amin'ny lafivalon'ny tany, hoy i Soeder.
Ary ny Oktoberfest dia mifamatotra amin'ny fifamatorana, fa tsy ny fanalavirana ny fiaraha-monina, miaraka amin'ireo olona mivory amin'ny marquees midadasika ary mipetraka amin'ny latabatra fiarahamonina lava be mba hiketrehana labiera, hivezivezy amin'ny saosisy, ary hihainoana ny mozika mivantana.
Rehefa natao ny festival farany, tamin'ny taona 2019, dia nanenika ny kitapom-bolan'ny toekarenan'i Bavaria tamin'ny € 1.23 miliara (1.5 lavitrisa $). Na izany aza, nantsoin'ny lehiben'ny Oktoberfest Clemens Baumgärtner ho “marina tanteraka” ny fanapaha-kevitra hanafoana ny hetsika tamin'ity taona ity. Ny fitazonana ny lazany ho "festival faran'izay avo lenta sy azo antoka" no zava-dehibe kokoa, hoy izy nanitrikitrika.
Tsy vao sambany tamin'ny tantaran'ny Oktoberfest 200 taona no noteren'ny mpikarakara hanafoana azy io noho ny valanaretina. Ny valanaretina kôlera dia nanefa ny drafitra tamin'ny 1854 sy 1873, raha ny Ady Lehibe Faharoa kosa no nahita azy io nandritra ny taona maro.
Oktoberfest hafa no andrasana hatao any Dubai amin'ity taona ity, saingy navoakan'ny mpikarakara ao Munich fa tsy misy ifandraisany amin'izany hetsika izany. Tamin'ny herinandro lasa teo, Baumgärtner dia nanapoaka ny fanaovana ilay festival breakaway ho "tsy misy dikany tanteraka" ary nivoady hijery ireo safidy ara-dalàna rehetra "hiarovana ny Oktoberfest ao Munich."
18 ora lasa izay
Ny fidiram-bolan'ny sidina amerikana dia nilatsaka efa ho 50% tamin'ny taona 2020